Antoko Teza "Tsy mifanaraka ny nofinofin'ny mpitondra sy ny tetibola"
"Sehoseho ivelany no tena vontoatin'ny asa tanterahin'ny fitondrana hatramin'izao" hoy ny antoko Teza araka ny tombana ankapobeny ny dingana vitan'ny mpitondra.
Fanohizan'ny asan'ny fitondrana HVM no hita taratra amin'ny faritra maro raha resaka asa fampandrosoana. Fampandriana adrisa hanarotsaromana ny kilema no handaniana andro, hoy hatrany ny antoko. Ahoana ny momba ny vary mora 1 600 taonina ? Izany ve no tena laharampaha mehana? Fa ahoana marina moa izany ny vidim-bary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha amidy 1 000 ariary any amin'ny mpanjifa eto Madagasikara rehefa avy notaterina tamin’ny sambo ? Nohamafisin'ny antoko Teza fa tsy mifandanja ny nofinofin'ny mpitondra sy ny tetibola natokana hiasana. Ohatra ny "puce"n' ny omby: 50 isa fotsiny no nasiana azy tany Tsiromandidy kanefa lazaina fa manerana ny nosy. Zavatra tsy voadinika ary voaporofo fa izany no olana amin'ny ekipa tsy niomana, hoy hatrany ny fanazavana.